Minisitra Roland Ravatomanga : Miraviravy tanana amin’ny olan’ny rano -
AccueilSongandinaMinisitra Roland Ravatomanga : Miraviravy tanana amin’ny olan’ny rano
Variana manangom-bola hanomanana fifidianana angamba ny minisitry ny Rano amin’izao fotoana izao, Roland Ravatomanga. Manoloana ny olan’ny rano miseho ankehitriny mantsy, toa tsy misy fandraisana andraikitra avy amin’ity minisitera misahana izany ity mihitsy, fa dia mandeha ho azy fotsiny amin’izao sy modiana tsy heno mihitsy ireo fitarainan’ny vahoaka mahakasika ny tontolon’ny rano.
Ho an’ny teto an-drenivohitra manokana, andro vitsivitsy lasa izay, saika nahitana olana momba ny rano avokoa ireo faritra maro. Velona ny fitarainana teny anivon’ny orinasa Jirama amin’ny maha solontenam-panjakana misahana izany. Tsy ny eto Antananarivo sy ny manodidina ihany anefa no ahitana io olana eo amin’ny sehatry ny rano io , fa hatrany amin’ny faritra sy any ambanivohitra rehetra any.
Hita taratra amin’izany sahady fa tsy voafehin’ity minisitra Roland Ravatomanga ity ny minisitera sahaniny. Hatramin’ny nahavoatendry ny tenany hitantana io minisiteran’ny Rano io, mbola tsy nisy asa mivaingana vita sy nataon’ity minisitra avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim) ity.
Noho izany, tsy mendrika ny hitantana sy hitondra eo amin’ny sehatra sahaniny ny minisitra Roland Ravatomanga, satria sady tsy mahavaha ny olan’ny vahoaka no tsy mahatanteraka ny adidy sy andraikitra hiantsorohany eto amin’ny firenena.
Mahakasika ny resa-be amin’ny fisian’ny bibikely any anaty rano vatsian’ny orinasa Jirama indray, nanazava ny tale jeneraliny, Jaomiary Olivier, fa ny orinasa Jirama dia miezaka hatrany manome fahafam-po ny mpanjifa. Nambarany, araka izany, fa raha toa ka mahita tranga mampiahiahy momba ny fahadiovan’ny rano ny vahoaka, afaka miantso mivantana ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Jirama.
Tsy misy fisondrotana
Ankoatra izay, nitondra fanazavana ny minisitry ny Angovo (MEH), Lantoniaina Rasoloelison, amin’ny maha solontenam-panjakana miadidy ny orinasa Jirama azy, fa tsy mbola manana eritreritra ny hanondrotra ny vidiny, na ny saran’ny rano ny eo anivon’ny Jirama. “Tsy manana eritreritra ny hanondrotra ny vidin’ny rano mihitsy ny minisitera mpiahy sy ny orinasa Jirama. Eny, fa na mbola tsy araka ny tokony ho izy aza ny vidin’ny rano eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, izay 0,4 Ar isaka litatra. Raha io vidin-drano amin’izao io, tsy misy tamberiny izany, izay tokony hanaovana famatsiana amin’ny fikarakarana ireo fotodrafitrasa eo amin’ny tontolon’ny rano”, hoy ny minisitry ny MEH.
Eo ihany koa, hoy izy, ny tsy fisian’ny fifandanjana eo amin’ny vidin’ny rano, satria misy migalabona amin’izany 0,4 Ar ny litatra izany, nefa misy sokajina ny vahoaka mividy lafo dia lafo.
Notsindriany fa tsy ny fampakarana ny vidin’ny rano sy ny jiro ihany no vahaolana eto amin’ity firenena ity, eo anivon’ny Jirama, fa tafiditra amin’izany ny fitantanana, ary indrindra ny ady atao amin’ny tsy fanjariana rehetra toa ny ara-pitaovana, ara-pitantanana, ara-pitondran-tena eo amin’ny mpiasan’ny Jirama, izay efa nisy tratra manao trafikana kaontera, sns. Eo ihany koa ny mpanjifa mandrisika amin’ny tsy fanjariana sy ny fangalarana, ary ny minia tsy mandoa vidin-drano sy jiro mihitsy… Izay indrindra, raha ny voalaza, no mampitsipozipozy ny orinasa Jirama. Na izany aza, hoy hatrany ny fanazavana, efa miezaka ary misy hatrany ny fandraisana andraikitra mahakasika izany.